LibreOffice 7.0 ikozvino yave kuwanikwa, ine nhau uye isina gakava reti | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice 7.0 ikozvino yavapo, ine nhau uye isina gakava rinopesana
Mushure mekuvhiringidzika uye neimwe nharo nguva na chitaridzi, Iyo Gwaro Sisekelo yakave nemufaro we zivisa kuvhurwa de LibreOffice 7.0. Ichi chinyowani chikuru chakaburitswa, icho kunyange chiri chokwadi kuti chinosanganisira nhau dzakatanhamara, ichokwadiwo kuti zvingangoita kuti yauya nedzimwe tupukanana tutsva dzinozogadziriswa mushanduro dzeramangwana. Muchokwadi, uye senguva dzose, kambani inoenderera ichipa v6.4.5 senge vhezheni yezvikwata zvekugadzira.
Pakati pezvakakurumbira zvinyorwa zvinouya neLibreOffice 7.0 isu tine kuti iyo Cairo kodhi yakatsiviwa neGoogle raSkia raibhurari, iyo yakaitawo kuti isu ikozvino tiwane mukana wekushandisa GPU kumhanyisa neVulkan. Pazasi iwe une runyorwa rwe nhau dzakatanhamara Ivo vauya pamwechete pamwe yazvino vhezheni yeanonyanya kufarirwa emahara suite suite.
1 LibreOffice 7.0 Pfungwa
2 Iye zvino inowanikwa kubva kune rekuvandudza peji
LibreOffice 7.0 Pfungwa
Tsigiro yeODF 1.3, yemuno LibreOffice fomati.
Skia graph injini uye Vulkan GPU kumhanyisa.
Yakagadziridzwa rutsigiro rweDOCX, XLSX, PPTX zvinyorwa.
Nyowani icon theme iyo inogoneswa nekukasira mune macOS uye inonzi Sukapura.
Mitsva yemakamuri emakamuri ane miseve, madhayagiramu, mifananidzo uye nezvimwe.
Glitter mhedzisiro uye akapfava mativi ezvinhu.
Navigator iri nyore kushandisa, iine mamwe mamenu mameseji.
Semi-yakajeka zvinyorwa zvino yatsigirwa.
Mabhukumaki anokwanisa kuratidzwa online pamashoko.
Yakapetwa manhamba mune zvinyorwa, kuitira kuenderana.
Kubata zvirinani kwemakotesheni nemaapositori.
Mabasa matsva echizvarwa cheasina kugadzikana manhamba manhamba.
Wakawedzera nzira pfupi yekhibhodi ye autosum.
Semi-yakajeka mavara anotsigirwa pano.
Zvinyorwa zvino zvadzokera ku8% nekutadza.
MaPDF akakura kupfuura 500cm anogona kugadzirwa zvino.
Iye zvino inowanikwa kubva kune rekuvandudza peji
LibreOffice 7.0 ikozvino yave kuwanikwa kune ese akatsigirwa masisitimu kubva kune yekuvandudza kurodha peji, iyo yatinogona kuwana kubva Iyi link. Vashandisi veLinux vanowanikwa muDEB, RPM uye mapakeji emabhinari, uye shanduro dzichagadziriswa munguva pfupi Snap y Flatpak. Ivo vedu varikushandisa shanduro dzakapihwa nezvatinogovera vachazofanira kumirira mazuva mashoma (kana mavhiki) kuti mapakeji nyowani aonekwe seyekuvandudza
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » LibreOffice 7.0 ikozvino yavapo, ine nhau uye isina gakava rinopesana